सन्दीप लामिछाने १४ दिन क्‍वारेन्टाइनमा
कस्ता मानिस अचानक धनी हुन्छन् त?
आज साउन १७ आइतबारको राशिफल पढ्नु होस
सोमबार, साउन १९, २०७७ मा प्रकाशित
नेपाली क्रिकेट खेलाडी सन्दीप लामिछानेलाई १४ दिनको क्‍वारेन्टाइनमा राखिएको छ । क्यारेबियन प्रिमियर लिग (सीपीएल) खेल्नका लागि ट्रिनिडाड एन्ड टोबागो गएका सन्दीपलगायत सम्पूर्ण खेलाडीलाई आइतबारदेखि क्‍वारेन्टाइनमा राखिएको हो ।
भदौ २ गतेदेखि शुरु हुने सीपीएल अगाडी सन्दीपले आफ्नो पीसीआर परीक्षणसमेत गराउनु पर्ने उनले बताईएको छ । पीसीआर परीक्षणपछि मात्र त्यसको नतिजा हेरेर सीपीएल खेल्न पाइने बताईएको छ ।
काठमाडौं उपत्यकामा पछिल्लो २४ घण्टामा ५१ सं’क्रमित फेला परेका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा दिइएको जानकारी अनुसार पछिल्लो २४ घण्टामा काठमाडौं उपत्यकामा ५१ सं’क्रमित थपिएका हुन् ।
देशका विभिन्न अस्पताल तथा प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा काठमाडौंका ४३, भक्तपुरका ५ र ललितपुरका ३ जनामा सं’क्रमण पुष्टि भएको छ । योसंगै काठमाडौंमा ४ सय ९२, ललितपुरमा १०८ र भक्तपुरमा ६४ सं’क्रमित गरी कुल उपत्यकामा कुल सं’क्रमितको संख्या ६ सय ६४ पुगेको छ ।
त्यस्तै आज थप मुलुकमा थप ४ सय १८ जनामा कोरोना भाइरस (कोभिड १९) सं’क्रमणको पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो २४ घण्टामा देशका बिभिन्न भागमा ४ सय १८ सं’क्रमित थपिएसंगै नेपालमा संक्रमितको कुल संख्या २० हजार ७ सय ५० पुगेको छ ।
पछिल्लो २४ घण्टामा देशभरका प्रयोगशालामा ७ हजार ६३७ नमुना परीक्षण गरिएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ । आइतबार २४६, शनिबार ३१५, शुक्रबार २२४, बिहीबार २७४, बुधबार २१०, मंगलबार ३५३, सोमबार १३९ जनामा कोरोना सं’क्रमण देखिएको थियो ।
१. दम, रुघाखोकी र ग्याष्ट्रिक कन्ट्रोल लगायत यस्ता छन् बट्टाईको अण्डा खाँदा हुने फाइदाहरु
२. आइतबार ह्वात्तै घट्यो सुनको मूल्य,
३. घरमा नागदाेष भएमा देखिन्छन् यस्ता संकेतहरु, समाधानको लागि हेर्नुहोस् ज्योतिषका सुझाव
४. भाग्यमानी संग मात्र हुने यी ६ कुरा,थाहा पाउनुस यस्तो छ ।
५. फेरि झापामा निषेधाज्ञा, नाकामा कडाइ